Windows 10 inokutendera iwe kuwana ako maLinux mafaera kubva kune anotsvaga | Linux Vakapindwa muropa
Microsoft inoenderera mberi ichitsigira Linux mune inotevera Windows 10 inogadziridza iyo inosvika muna Kubvumbi 2019, vhezheni nhamba 1903, uye kambani yakatsanangura dzimwe shanduko dzinouya.
Imwe yeakanyanya kukosha ekuvandudza mune inotevera gadziriso mukana we pinda maLinux mafaera akananga kubva kuExpress, default maneja weWindows 10.
Parizvino, iyi sarudzo chikamu chekuvaka 18836, inova pre-kuvaka ye Windows 2020 Kubvumbi 10 Gadziriso, asi Microsoft inotaura kuti ichave ichiwanikwa mushanduro 1903 ino zhizha.
Microsoft inotsanangura kuti kumisikidza uku kuri nyore sezvazvingaite. Ingo nyora Explorer.exe pane chero kugoverwa kweLinux on Windows 10 yakaiswa neWSL uye iwo murairo unofanira kuvhura iyo faira yekutsvagisa neLinux mafaera aripo sechikamu cheakatsaurwa ekuchengetedza.
Dzimwezve kuvandudzwa munguva pfupi yeWindows 10 uye Linux
Vashandisi vanogona kuita nemafaira avo eLinux zvakafanana nezvavanogona neWindows 10. Microsoft inotaura izvozvo ficha iyi iri mukutanga nhanho Uye kuvandudzwa kwakawanda kuri kuuya munzira, saka chiitiko ichi chaizonatsurudzwa apo Windows 10 kuvaka 1903 kunowanikwa muna Kubvumbi.
Windows 10 Kubvumbi Kubvumbi, kana Kuvaka 1903, ichagadziriswa mwedzi unouya, kuve nhengo dzeiyo Insider chirongwa chekutanga kuigamuchira mukuumbwa kweRTM. Ruzhinji rwekuvandudza ruchasvika muna Kubvumbi nenzira yakaenzanisirwa kumakomputa ese epasi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Zvimwe Linux » Windows 10 inokutendera iwe kuwana ako maLinux mafaera kubva kune anotsvaga